I Confucius (fiteny sinoa : 孔子; pinyin : Kǒng zǐ; Wade-Giles : K'ung-tzu, na fiteny mandarina : 孔夫子; pinyin: Kǒng Fūzǐ; Wade-Giles: K'ung-fu-tzu), na "Tompo Kong", dia filôzofy sinoa teraka tamin'ny 28 Septambra -551 ary maty tamin'ny taona -479. Ny anany sy ny filôzofiany dia nianjadina ny heritreritra sy ny fomba fiainan'ny Sinoa, ny Koreana, ny Japoney ary ny Vietinamianina.
Teraka tany Zou (陬) any akaikin'i Qufu (曲阜) any amin'ny faritan'ny Shandong i Confucius, antsoin'ny sinoa Kǒngzǐ (孔子) na Kǒng Fūzǐ (孔夫子) izy, ny dikany amin'ny sinoa Tompo Kong, navadiky ny zezoita "Confucius" ny anarany, anarana mitovitovy feo amin'ny "Kǒng Fūzǐ" .
I Confucius dia teraka tamin'ny 21 Septambra -551 any Zou (陬), tsy lavitry ny tanànan'i Qufu (曲阜), amin'ny tany Lu, any amin'ny faritan'i Shandong.
Lisitry ny zavatra madinidinika 7001-8000
Ity no lisitry ny zavatra madinidinika ao amin'ny habakabaka manomboka amin'ny isa faha-%s hatramin'ny isa faha-%s.
Ny Oniversite Fianarantsoa dia sekoly mpanjakana ambaratonga ambony, miorina ao Fianarantsoa renivohitra faritra Haute Matsiatra any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara no misy azy, i Marie Monique RASOAZANANERA no filoha ankehitriny.
Ny Oniversite Toamasina dia sekoly mpanjakana ambaratonga ambony, miorina ao Toamasina renivohitra faritra Antsinanan'i Madagasikara no misy azy, i Dokotera ZAFITODY Conscient no filohany ankehitriny.